Bandhigyada Reed waxay ku dhawaaqeen Agaasime cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Bandhigyada Reed waxay ku dhawaaqeen Agaasime cusub
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Kerry Prince ayaa loo magacaabay Agaasimaha Brand-ka ee dib-u-habeeynta Carwooyinka Reed
Bandhigyada Reed ayaa ku dhawaaqay in Kerry Prince, loo magacaabay inuu noqdo agaasimaha cusub ee calaamadaha Bandhigyada Reed ee fadhigeedu yahay UK.
Kooxda magaca cusub ee la sameeyay waa isku-darka shirkadda 'B2B' iyo 'Reed Travel Exhibitions' waxayna mas'uul ka noqon doontaa soo-saarista faylalka noocyada dhacdooyinka si wanaagsan loo aasaasay, oo ay ku jiraan Suuqa Safarka Carabta (ATM).
Prince ayaa yiri: “Waxaan rajeynayaa inaan hogaamiyo kooxdan cusub. B2B iyo safarada iyo dhacdooyinka warshadaha waxay la kulmeen caqabado aad u fara badan tan iyo bilowgii cudurka faafa laakiin waxaan rajeyneynaa qorsheyn postCovid muddada soo kabashada.
“Sannadkan, ahmiyaddayadu waa in aan soo bandhigno dhacdooyin jireed oo sida COVID u ah ammaan iyo ammaan intii suurtagal ah iyo sidoo kale in aan bixino 'soo bandhige aan joogin' iyo ama ikhtiyaarrada marin-u-helidda fog ee dhagaystayaasheena oo aan annaga shaqsi ahaan nagu soo biiri karin
"Waxaan rajeynayaa inaan sii wado taageerida qeybaha aan kala shaqeyno wadada soo kabashada iyo koritaanka mustaqbalka fog," ayuu yiri Prince.
Prince wuxuu leeyahay in kabadan 20 sano oo waayo aragnimo ah qeybta dhacdooyinka shirkadaha, ka shaqeynta shirarka, shirarka iyo bandhigyada ganacsiga adduunka oo idil. Waxay shaqadeeda ka biloowday New Zealand waxayna sidoo kale ka soo shaqaysay Australia, China, US, Barbados iyo UK.
Prince wuxuu ku biiray Bandhigyada Reed ee 2015 wuxuuna ka qabtay jagooyin hoggaamineed dhammaan dhacdooyinka shirkadda B2B. Tani waxaa ka mid ah laba sano oo ah agaasimaha faylalka 'Reed Travel Exhibitions' IBTM Dhacdooyinka, dhacdooyinka ganacsiga ee horseedka ka ah ganacsiga adduunka.
Danielle Curtis, Agaasimaha Bandhigga ee gobolka Bariga Dhexe iyo Suuqa Safarka ee Carbeed ayaa tiri: “Kerry kaliya ma fahamsana qaab dhismeedka shirkadeena iyo faylalkayaga munaasabadaha safarka, waxay sidoo kale leedahay qibrad aad u tiro badan oo caalami ah, gaar ahaan aqoonteeda Australasia iyo UK suuqyadu waxay qiimo u yeelan doonaan kooxda Suuqa Safarka ee Carabta. ”
Suuqa Safarka ee Carabta wuxuu ka dhici doonaa Xarunta Ganacsiga Dunida ee Dubai laga bilaabo 16-19 Maajo, 2021. Dhacdada tooska ah waxaa la socon doona toddobaad kadib ATM Virtual (24-26 May 2021).
Prince wuxuu ku biirayaa kooxda hogaaminta carwooyinka ee UK wuxuuna warbixin siinayaa Anna Dycheva-Smirnova, oo loo magacaabay agaasimaha guud ee Reed Exhibitions UK horaantii sanadkan, marka lagu daro doorkeeda agaasimaha guud ee Ruushka, Turkiga iyo Bariga Dhexe.
Anna Dycheva-Smirnova ayaa tiri: “Tani waa horumar wanaagsan oo loo qabtay Reed Exhibitions UK. Kerry waxay ahayd xubin kooxeed qiimo leh tan iyo markii ay kubiirtay Reed lix sano kahor waana ku faraxsanahay inay aqbashay tartankan cusub.
"Waxaan ku kalsoonahay in Kerry uu ku sii wadi doono hogaaminta si hufan, u heellan iyo guul waxaana aad u rajaynayaa la shaqaynta iyada iyo kooxda inteeda kale ee hogaaminta."